Iyo itsva vhezheni yeiyo yakasarudzika chikuva PeerTube 1.2 inosvika | Linux Vakapindwa muropa
Iyo itsva vhezheni yeiyo yakasarudzika chikuva PeerTube 1.2 inosvika
PeerTube ipuratifomu yakasarudzika ine chinangwa isangano rekutora mavhidhiyo uye kutenderera kwevhidhiyo.
PeerTube inopa imwe yakazvimirira imwe kubva pamapuratifomu akakurumbira YouTube, Dailymotion uye Vimeo, uchishandisa P2P-yakavakirwa zvemukati yekuparadzira netiweki nekubatanidza vashanyi mabhurawuza. Izvo zviitiko zveprojekti zvinogoverwa pasi peAGPLv3 rezinesi.
1 PeerTube inoshanda sei?
1.1 Mushandisi anogona sei kupa kana kuwana PeerTube?
1.2 Wepamusoro 1.2 Regedza Innovations
PeerTube inoshanda sei?
PeerTube zvinoenderana nekushandiswa kweBitTorrent Client "WebTorrent", iyo inomhanya mubrowser uye inoshandisa tekinoroji yeWebRTC.
Izviirve kumisikidza P2P chiteshi - kutungamira kutaurirana pakati pebrowser uye neActionPub protocol.
Iyo yewebhu interface inopihwa neiyo projekiti inovakwa uchishandisa angular fomati.
PeerTube's federated network inoumbwa senzvimbo diki yemavhidhiyo anotambira maseva yakabatana, imwe neimwe ine mutariri wayo uye mitemo yayo inogona kutorwa.
Sevha yega yega ine vhidhiyo inotamba chinzvimbo cheBitTorrent tracker iyo inobata maakaunzi evashandisi veiyi server uye yavo vhidhiyo
Mushandisi ID inoumbwa nenzira "@user_name @server_domain". Dhata yekuchinjisa panguva yekuona inoitika zvakananga kubva kubhurawuza kwevamwe vashanyi vanoona zvemukati.
Kana pasina munhu ari kuona vhidhiyo, kudzoka kwacho kwakarongedzwa neseva uko vhidhiyo yakatanga kuiswa (iyo WebSeed protocol inoshandiswa).
Pamusoro pekugovera traffic pakati pevashandisi vanoona mavhidhiyo, PeerTube zvakare inobvumira vanyori kumhanya node dzekugovera vhidhiyo yekutanga kuchengetedza vamwe vanyori 'mavhidhiyo, nokudaro vachigadzira kwete chete yakaparadzaniswa netiweki kwete kwete chete vatengi, asiwo maseva uye zvakare ichipa kukanganisa kushivirira.
Kutanga kutenderera kuburikidza nePeerTube, mushandisi anongoda kurodha vhidhiyo, tsananguro uye seti yemaki (yakafanana nezvinoitwa pane chero chimwe chikuva chakafanana) pane rimwe remaseva.
Mushure meizvozvo, vhidhiyo yacho ichave ichiwanikwa mukati mese federated network uye kwete chete kubva kune huru yekurodha server.
Mushandisi anogona sei kupa kana kuwana PeerTube?
Kushanda naPeerTube uye kutora chikamu mukuparadzira zvemukati, yakajairika webhu bhurawuza inokwana uye hapana imwe software inodiwa.
Vashandisi vanogona kuteedzera chiitiko pane yakasarudzwa yevhidhiyo chiteshi nekunyorera kumatanho ezvekufarira pamubatanidzwa masocial network (semuenzaniso Mastodon nePleroma) kana kuburikidza neRSS.
Kugovera vhidhiyo uchishandisa P2P kutaurirana, mushandisi anogona zvakare kuwedzera yakasarudzika widget ine yakavakirwa-mukati webhu player kune yavo saiti.
Kana mushandisi asina kugutsikana nemitemo yekuisa mavhidhiyo pane chaiyo PeerTube server, vanogona kubatana kune imwe server kana kumhanyisa yavo sevha.
Yekukurumidza server kutumirwa, yakafanogadzirirwa Docker mufananidzo unopihwa. Parizvino, maSeva makumi matatu nemasere akatangwa inotsigirwa nevanozvipira vakasiyana siyana nemasangano kutora zvirimo papuratifomu.
Wepamusoro 1.2 Regedza Innovations
Munguva pfupi yapfuura, chiziviso chakaitwa chekuburitswa kwekutanga kwePeerTube 1.2 mairi system yekuzivisa yakaitwa.
Ichi kuitira kuzivisa vashandisi nezve mitsva mitsva, mavhidhiyo matsva mukunyorera, moderator zviito, vatema mavhidhiyo, maitiro ekupedzisa kutengeswa kwevhidhiyo, vatsva vatsva, taura zvirevo kune vamwe vanhu, kunyoresa vashandisi vatsva (kune vatungamiriri).
Notifications dzinogona kuratidzwa pawebhu webhu kana kutumirwa neemail.
Iye zvino mune iyi vhezheni mamoderita vane mukana wekugadzirisa vashandisi (wedzera, bvisa, gadzirisa kana kuvharira).
Uyewo akawedzera kugona kubvisa emuno mavhidhiyo kubva kumubatanidzwa network kuburikidza nema blacklists.
Yakawedzerwa kugona kuona nhoroondo yemavhidhiyo akavhurika, pamwe nekudzima kwavo kubata nemusoro nekuchenesa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo itsva vhezheni yeiyo yakasarudzika chikuva PeerTube 1.2 inosvika
Ubuntu 18.04.2 LTS yakanonoka kusvika Zuva raValentine nekuda kwekukanganisa kwekutanga